Ndege nyowani kubva kuWashington kuenda kuLagos, Nigeria kuUnited Airlines izvozvi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Ndege nyowani kubva kuWashington kuenda kuLagos, Nigeria kuUnited Airlines izvozvi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Nigeria Breaking News • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
United Airlines ichashanda nzira iyi neBoeing 787 Dreamliner iine zvigaro makumi maviri neshanu zveUnited Polaris, zvigaro 28 United Premium Plus zvigaro zvehupfumi, zvigaro zveEconomy Plus ne21 zvigaro zvehupfumi. Ndege dzichasimuka Washington, DC neMuvhuro, China neMugovera uye kudzoka kubva kuLagos neChipiri, Chishanu neSvondo.
United Airlines inozivisa sevhisi nyowani kubva kuWashington, DC kuenda kuLagos, Nigeria.
United Airlines ichaita nendege nhatu dzevhiki nevhiki pakati peWashington, DC neLagos, Nigeria yakatarisana naNovember 29, 2021.
Ndege nyowani inopa yakanakira imwechete-yekumira kubatana kunzvimbo dzinopfuura makumi masere muAmerica dzese.
United Airlines yazivisa nhasi kuti sevhisi nyowani pakati peWashington, DC neLagos, Nigeria ichatanga Mbudzi 29 (zvichitenderwa nehurumende). Ndege ichashanda nendege nhatu dzevhiki nevhiki ichibatanidza guta guru reUS kuguta rakakura reNigeria, inova zvakare nzvimbo yepamusoro yekuWestern Africa kune vafambi veUS.
“Iyi ndege itsva yeku Lagos yanga ichitarisirwa zvikuru nevatengi vedu uye ichipa sevhisi yekutanga isingamire pakati peWashington, DC neNigeria, pamwe nekureruka, kubatana kwekumira kune dzimwe nzvimbo dzinopfuura makumi masere muAmerica kusanganisira Houston neChicago, ”akadaro Patrick Quayle, United Airlines'mutevedzeri wemutungamiriri wepasi rese network uye mubatanidzwa. "Tikamirira United yose tinoda kupa kutenda kwedu kuNigerian Civil Aviation Authority uye neDhipatimendi rezvekutakura zvinhu muUS nekutsigira zvirongwa zvedu zvekupa sevhisi iyi."
"Takakosheswa kushanda nevatinoshanda navo kuUnited Airlines kuti titambire kubatana kwavo kwechipiri kusingamire kubva kuDulles International kuenda kuAfrica," akadaro Carl Schultz, mutevedzeri wemutungamiri webhizimusi rekusimudzira bhizinesi yendege kuMetropolitan Washington Airports Authority. "Lagos inobatana nedzimwe nzvimbo dzinosvika makumi mashanu dzisiri dzakamira dzese dzese dziripo parizvino dzinoshandiswa nepasuo reNational Capital Region pasirese."
United Airlines ichashanda nzira iyi ne Boeing 787 Dreamliner iine 28 United Polaris bhizimusi kirasi manyepo-magaro zvigaro, 21 United Premium Plus zvigaro zvehupfumi, zvigaro makumi matatu nesitatu zveEconomy uye 36 zvigaro zvehupfumi. Ndege dzichasimuka Washington, DC neMuvhuro, China neMugovera uye kudzoka kubva Lagos nemusi weChipiri, Chishanu neSvondo.
Iyi nhambo nyowani inovakira pakuwedzera kweUnited kuenda muAfrica uye inosimbisa chinzvimbo chehutungamiriri cheUnited States kuenda kuAfrica kubva kunharaunda yemetro yeDC, nendege zhinji kuenda kondinendi kupfuura chero imwe ndege. Gore rino chete, United yakatanga basa idzva pakati peNew York / Newark neJohannesburg, South Africa uye pakati peWashington, DC neAccra, Ghana. Uye uno Zvita naJanuary, United ichawedzera sevhisi yayo kuenda kuAccra kubva nendege nhatu dzevhiki kusvika zuva nezuva * sezvo vatengi vachienda kumba kuzororo rechando. United iri kudzorera sevhisi yayo inozivikanwa pakati peNew York / Newark neCape Town, South Africa muna Zvita 1.
Ndege nyowani dzeUnited dzinoenderana nemitemo yenyika imwe neimwe yeCOVID-19 uye vatengi vanofanirwa kutarisa zvinodiwa kuenda vasati vafamba.